मुर्गापालन व्यवसाय नै नेपालको राजनीति ! - नेपालबहस
मुर्गापालन व्यवसाय नै नेपालको राजनीति !
नेपालको राजनीतिः कोटको खल्तीका अण्डाहरुको व्यवस्थापन
| १६:०३:३९ मा प्रकाशित
भारत प्रवासनबाट नेपाल फर्केपछि राजा वीरेन्द्र र बीपी कोइरालाबीचको पहिलो भेटमा धेरै अन्तरंग विषयमा खुल्ला छलफल भयो । त्यस भेटमा राजाले बीपीलाई तिम्रो संगठनमा तिम्रा कति जना मान्छे छन् भन्दा बीपी निरुत्तर भएका थिए । उता बीपीले पनि सोही प्रकृतिको प्रश्न गर्दा राजा पनि निरुत्तर भएका थिए । तर सेनामाथिको भरोसाका कारण राजा त्यति चिन्तित थिएनन् जति बीपी चिन्तित भएर सो भेटबाट बाहिर निस्किएका थिए ।
भारतको विरोध गर्ने जतिलाई देशभक्त देख्ने, जनै लाउनेहरु जतिलाई हिन्दू देख्ने, नेपाली भाषा बोल्ने जतिलाई नेपाली नागरिक ठान्ने तथा टोपी लाउने जतिलाई भैयाद ठान्ने दृष्टिदोषको फल शाहवंश भन्दा अरु कसले भोग्यो होला र ? राष्ट्रको रक्षा होला भन्ने कम्युनिष्टलाई एक बनाएर आफ्नो हित रक्षा गर्ने चिनियाँहरु त्यतिबेला निद्राबाट ब्युझें जतिबेला उनले भनेको मान्ने एकजना कम्युनिष्ट नेता पनि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा देखा परेनन् ।
गणेशमान र किशुनजीले कम्युनिष्टलाई मिलाएर प्रजातन्त्र ल्याउने नीतिले उनीहरुलाई कसरी खायो भन्ने विषयका भुक्तभोगी स्वयम् किशुनजी र गणेशमानको परिवारले आफ्नो जीवनकालमा भोगेको चुनावी पराजयले नै प्रष्ट पार्दछ । बीपी सदैव असफल भईरहनु, किशुनजीले चुनाव हार्नुु, गणेशमानको परिवार राजनीतिबाट पाखा लाग्नु, कोइराला परिवार नेपालको राजनीतिक परिदृष्यबाट एकाएक गायव हुनु फगत संयोग मात्र थिएन ।
जब बाहय शक्ति निर्णयमा पुग्छ, अनि राजनीतिक अस्थिरता पनि सँगसँगै हराउँछ । कहिले काँही बाह्य शक्तिका विभिन्न कोटधारीहरुबीच आफ्ना अण्डाबाट राम्रो प्रतिफल दिने मुर्गा जन्मिन्छ भन्ने विषयमा तर्कवितर्क हुँदा पनि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना हुन्छ ।
उपरोक्त दृष्टान्तहरुबाट एउटा सहज निचोड निस्कन्छ । यहाँ जो देशभक्त भनी चिनिएका छन्, ती देशभक्त होइनन्, जो प्रजातान्त्रिक भनी चिनिएका छन् ती प्रजातन्त्रवादी होइनन् र जो कम्युनिष्ट भनी चिनिएका छन् ती कम्युनिष्ट होइनन् । नेपालमा जुनसुकै वादका समर्थक वा विरोधी जो–जति सतहमा देखिन्छन्, सुनिन्छन्, ती कोही पनि त्यो वादका न त समर्थक हुन् न त विरोधी हुन् । नेपालमा घोषित लक्ष्यहरु, सिद्धान्त र कार्यक्रमहरु सबै प्रयोजित र अमुक लक्ष्य हासिक गर्नका लागि खडा गरिएका बुख्याचामात्र हुन् ।
२००७ सालमा राजा त्रिभुवनको दिल्ली पलायन पश्चात् नेपालको राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेपको युग शुरु भएको हो । त्यो हस्तक्षेपको सेटिङ गजवको छ । नेपालका हरेक सिद्धान्त, विचार, वाद, प्रतिवाद, असन्तुष्टि, सन्तुष्टि, सत्ता, प्रतिपक्ष सबैतिर नेतृत्वमा आफ्ना गोटीहरु स्थापित गरी राख्ने र परिस्थिति अनुसार ती गोटीहरु परिचालन गर्ने, स्थापित गर्ने, विस्थापन गर्ने, पुनस्थापन गर्ने यस्तै यस्तै खेल खेली रहने, सबैलाई आशा पनि देखाई रहने, सबैलाई पटक पटक सन्तुष्ट पनि गराई रहने यो गजवको खेल चालु छ ।
एउटै टोकरीमा सबै अण्डा नराख भन्ने उखानलाई यस सेटिङमा गजबसँग फिट गरिएको छ । त्यसैले अण्डाहरु कोटका विभिन्न गोजीहरुमा राखिएका छन् । कहिले कुन अण्डालाई टेबुलमा राखिन्छ त कहिले कुनै अण्डालाई टेबुलमा राखिन्छ र नाटक मञ्चन हुन्छ । यस नाटकलाई पटमुर्ख राजनीति भनेर आफ्नो सर्वस्व गुमाउछन् भने चतुरहरु यही नाटक मञ्चनबाट आफ्नो आर्थिक हैसियत बृद्धि गर्छन् ।
जब पासो घाँटीसम्म पुग्छ अनि राजीनामा आउँछ, भविष्यमा फेरी ल्याउँछु भन्ने अण्डा व्यवस्थापकको आश्वासनसहित । यसरी बाह्य शक्तिका कोटमा सजिएका यी अण्डाहरुको वर्तमान गर्जन मालिकले अण्डा यताउता सार्दाको सलवलाहट मात्र हो ।
नेपालमा जब जब राजनीतिक अस्थिरता आउँछ, मानिसहरु यसलाई नेपाली खेलाडीहरुको कर्मण्यता, अकर्मण्यताका रुपमा व्याख्या हुने गर्दछ । तर यो केही पनि होइन । बाह्य शक्तिले आफ्ना कोटका गोजीमा राखेका अण्डाहरु मध्ये कुन अण्डालाई टेबुलमा राख्दा आफूलाई बढी फाइदा हुन्छ कुन अण्डालाई अहिले कोटका खल्तीमा लुकाई राख्दा फाइदा हुन्छ भन्ने सवालको निर्णयमा विलम्व हुँदा आउने अनिर्णयको अवस्थामा नेपालमा पनि अनिश्चिय देखिन्छ । जब बाहय शक्ति निर्णयमा पुग्छ, अनि राजनीतिक अस्थिरता पनि सँगसँगै हराउँछ । कहिले काँही बाह्य शक्तिका विभिन्न कोटधारीहरुबीच आफ्ना अण्डाबाट राम्रो प्रतिफल दिने मुर्गा जन्मिन्छ भन्ने विषयमा तर्कवितर्क हुँदा पनि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना हुन्छ ।
वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता पनि कुन अण्डा झिकेर टेबुलमा राख्ने, कुन अण्डा फ्राई गर्ने, कुन अण्डा उमाल्ने, कुन अण्डा भोलिको व्रेकफाष्टका लागि साचेर राख्ने भन्ने विषयमा बाह्य शक्तिले आंकलन गर्न ढिलो हुँदाको परिणाम हो । जुन दिन बाह्य शक्ति निर्णयमा पुग्छ, त्यो दिन स्वेटरको धागो फुस्के झैं वर्तमान राजनीतिका कथित व्यवधानहरु चुट्कीको भरमा समाधानमा परिणत हुन्छन् । त्यसैले राजनीतिक शास्त्रका पंडीतहरु नेपालको राजनीतिमा जो मै हुँ भन्छ त्यो कि त बाह्य शक्तिको कोटमा सजिएको अण्डा हो कि त्यो यो संसारको सबैभन्दा मुर्ख प्राणी हो भन्दछन् ।
यो अण्डा व्यवस्थापनको खेलमा अहिले नेपालमा चारवटा शक्ति सक्रिय छन् । नागरिकता वितरणमार्फत प्रभूत्व स्थापित गरी पानी प्राप्ति दक्षिणको एकसूत्रीय लक्ष्य रहेको छ । सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गरी ठेक्कापट्टा प्राप्त गर्नु उत्तरको लक्ष्य हो । धर्मपरिवर्तनमार्फत प्रभुत्व स्थापना पश्चिमको ध्येय हो भने नागरिकताको खेलमा आफू पनि सामेल भई नेपालमा मुस्लिम बहुल पकेटहरु स्थापना गर्नु मुस्लिम संसारको ध्येय छ ।
यी चारवटै शक्तिहरुले आफ्ना आफ्ना अण्डाहरु फिट गरेका छन् । त्यसलै नेपालको राजनीतिमा यी चारवटा विषयमा कहिल्यै पनि विवाद हुँदैन । राष्ट्रिय सहमतिका विषयहरु पनि यी चार वटै विषयहरु हुन् । अर्थात् नागरिकता वितरण, उच्च बाँध निर्माण, जलविद्युत आयोजनाको लाईसेन्स, धर्म परिवर्तन, हिन्दू धर्म र नेपाली भाषीको संख्या न्युनीकरण जस्ता विषयमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुमा आम सहमति छ । आफू अण्डा हुँ भन्ने विषयमा नेपालका सबै राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई ब्रह्मज्ञान पनि छ ।
तर पनि म अण्डा होइन भन्ने देखाउनु पनि छ, । एकदिन भएपनि सत्ताको रसस्वादन किन नगर्ने भन्ने लालसा पनि मानवजन्य स्वभाव नै हो । कुर्सीमा बसेका बेला चाकरीबाजहरुले फुलाउँदा सिर्जना हुने दम्भले म पनि त सानोतिनो कर्ता हुँ भन्न भ्रम पनि उत्पन्न हुन्छ नै । म पनि केही त हुँ भन्ने कुराको प्रदर्शन नगर्ने हो भने भोलि टेर्ने कस्ले भन्ने मनोविज्ञानले पनि काम गरेकै हुन्छ । फेरी अण्डा व्यवस्थापकले तिमीलाई केही हुँदैन भनेर आश्वसान पनि दिई नै रहेको हुन्छ । जब पासो घाँटीसम्म पुग्छ अनि राजीनामा आउँछ, भविष्यमा फेरी ल्याउँछु भन्ने अण्डा व्यवस्थापकको आश्वासनसहित । यसरी बाह्य शक्तिका कोटमा सजिएका यी अण्डाहरुको वर्तमान गर्जन मालिकले अण्डा यताउता सार्दाको सलवलाहट मात्र हो ।
सारांशमा भन्नुपर्दा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको जन्म जुन भूमिमा भएको हो, सो भूमिमा नै तत्पश्चात मुर्गापालन र अण्डा उत्पादन कार्य हुँदै आएको छ । त्यस मुर्गापालन व्यवसायमा पश्चिम, मुस्लिम संसार र चीनको पनि सानोतिनो शेयर छ । यही मुर्गापालन व्यवसाय नै नेपालको राजनीति हो ।
नागरिकता अध्यादेशको सुनुवाई गर्न वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सम्मिलित इजलाश २ हप्ता पहिले
नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट, शुक्रबार सुनुवाई २ हप्ता पहिले
माइतीको संरक्षणमा बसेकी राईको बन्यो घर १० मिनेट पहिले
निलम्बित एमाले सांसदहरु प्रदेशसभाको बैठकमा भाग लिने ! १२ मिनेट पहिले
शाङ्पा फाउण्डेशनद्वारा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग १७ मिनेट पहिले
उपत्यकाको निषेधाज्ञा खुकुलो, अब साँझबिहान हिँडडुलदेखि केही व्यापार गर्न पाइने १८ मिनेट पहिले
कांग्रेस नेता खतिवडाले गरे अक्सिजन सिलिण्डर सहयोग २५ मिनेट पहिले
आज वाग्मतीसहित पाँच प्रदेशका ठूलो पानी पर्ने २६ मिनेट पहिले
एनआईसी एशिया क्यापिटलले असार १० गतेदेखि अर्को म्युचुअल फण्ड निष्काशन गर्दै ३७ मिनेट पहिले
बिर्तामोडमा फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई १६ घण्टा पहिले
राउटे युवतीमाथि यौन दुर्व्यवहार: भिडियो प्रसारण गर्ने साइट बन्द गर्न आदेश ३ दिन पहिले
रियल मड्रिडले अल्बालाई अनुबन्धित गरे २ हप्ता पहिले
बागमती प्रदेशसभामा आज नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरिने ५ दिन पहिले
सत्ता जोगाउन ओलीको नयाँ चाल: योगेश, गोकर्ण र सुरेन्द्र परे जालमा २ हप्ता पहिले
कोभिड र बजेट अभावको मारमा हुलाकी राजमार्ग ४ हप्ता पहिले
अरुण भ्याली हाइड्रोपावरले ४ लाख ३६ हजार कित्ता शेयर बिक्री गर्ने २ हप्ता पहिले
संविधान रक्षाकालागि राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउँः थापा ४ हप्ता पहिले
साधना लघुवित्तद्वारा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग १ महिना पहिले
देशभरका शिवालयमा शतबीज छर्न लाखौँ भक्तजनको भिड २ वर्ष पहिले
भ्रममा नपरी नियमित काममा सक्रिय हुन गृहको अनुरोध २ वर्ष पहिले